Ukususa i-Makeup Ngaphandle KwamaWipe - Izinyathelo Nemikhiqizo Engcono Kakhulu | Bezzia
Ungasusa kanjani ukwakheka ngaphandle kokusula
Ukususa izimonyo ngaphandle kokusula kungenzeka futhi ngemikhiqizo esiyaziyo. Ngoba yize kungenye yezindlela ezilula kakhulu zokuvalelisa izimonyo, ngeke sihlale sithatha isinyathelo esihle esikhunjeni sethu. Ngakho-ke, akukho okufana nokubheja kwezinye izinketho.
Ngoba ngaphandle kokuvalelisa ukwakheka sidinga nokubheja isikhumba esinempilo ngakho-ke kubalulekile ukulandela izinyathelo ezifanele. Sizothola hhayi eyodwa kuphela, kodwa eziningana zalezo zinyathelo ukwenza kube lula nakakhulu kuwe ukuthi uvalelise izimonyo futhi sawubona ku isikhumba esinakekelwa kakhulu.
1 Susa izimonyo ngaphandle kokusula kodwa ngamanzi we-micellar
2 Ukuhlanza ubisi
3 Amafutha okususa ukwakheka
4 Isipanji seKonjac
5 Kungani ungasusi ukwakheka ngama-wipe
Susa izimonyo ngaphandle kokusula kodwa ngamanzi we-micellar
Yize kunomkhiqizo okhona ukuhlala lowo amanzi e-micellar. Kungakho iningi lethu lishiya izesuli ngemuva kuye. Ukuthungwa kwayo ngendlela yamanzi, njengoba igama layo liphakamisa, kususa ukwakheka kudlula okukodwa. Ilungele bonke ubuso kepha futhi namehlo. Ungayisusa ngebhola likakotini futhi ngaleyo ndlela wenze inqubo isheshe futhi ibe lula. Ngaphezu kokususa izimonyo, ibuye ithambe, ithoni futhi ithuthukise isikhumba, ngaphandle kokukhohlwa umphumela wokuthambisa obangelwa yiso. Kukho konke lokhu, kungenye yezindlela zokubheja eziqinile okufanele uzicabangele.
Yize amanzi e-micellar ethulwe njengenguquko ephelele, ubisi lokuhlanza ngomunye wemikhiqizo eyisisekelo kepha akubalulekile kangako. Ngaphezu kokuhlanza, i-hydrating kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, ngeke isome kepha kuphambene impela. Kuphelele esikhunjeni esomile ngalesi sizathu, kodwa futhi nakwizwela kakhulu. Ngaphezu kokubashiya behlanzekile, kuzophinde kubanikeze ukuthinta okuthambile kakhulu ngenxa ye-hydration.
Amafutha okususa ukwakheka
Yize mhlawumbe kungeyona enye yezinketho zokuqala okufanele uzicabangele, kufanele kushiwo lokho Amafutha asinikeza amavithamini amaningi futhi, futhi, ne-hydration eningi ngesikhumba sethu. Kungakho ukuyinakekela kuze kube sezingeni esingabheja ngayo. Amafutha kaJojoba noma e-alimondi awasoze aswela ekhaya lethu. Ngoba zingokwemvelo futhi ngoba ngamaconsi ambalwa nje sizokwanela. Uma unesikhumba esomile nabo bazokuphelela.
Impela nawe uyazi ngoba isibe ngesinye sezinto ezibaluleke kakhulu. Kungakho kufanele futhi ukuthi ibe sesikhwameni sakho sokwenza izimonyo. Yebo, vele usuyakwazi lokho ingasetshenziswa ngomkhiqizo noma iyodwa. Lesi sipanji sinezinjongo eziningi yingakho sisithanda kakhulu. Uma uyithambisa, izothamba futhi umsebenzi wokususa izimonyo uzoba lula nakakhulu. Ngaphezu kwalokho, kuya ngohlobo lwesikhumba onalo, ungakhetha izinketho ezahlukahlukene zalo.
Kungani ungasusi ukwakheka ngama-wipe
Iqiniso ukuthi ngemuva kokubona lezi zinketho, kusiholela ekukhulumeni ukuthi ukususa izimonyo ngaphandle kokusula kungenzeka. Iqiniso ukuthi uma wenza lesi sinyathelo ngezikhathi ezithile akukho okuzokwenzeka. Kepha ukusetshenziswa okuqhubekayo kwazo kungahlanza isikhumba sakho kahle futhi kahle. Ini kuzodala ukuthi izimbotshana zigcwale futhi kuvele amakhanda amnyama nakho konke ukwehluka kwawo. Ngenxa yezinhlanganisela zakhona zingenza futhi isikhumba sibonakale somile, ikakhulukazi okujwayele ukuba nesikhumba esinga manzi kahle. Ngakho-ke, kufanele sikhawulele ukusetshenziswa kwayo ngangokunokwenzeka futhi sikhethe imikhiqizo engenhla ngaphezu kokuhlanza isikhumba ngamanzi, okuhlala kuyikhambi elihle. Nawe? Usebenzisa ama-wiper remover wipes?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ungasusa kanjani ukwakheka ngaphandle kokusula
Kuyini ukuphakanyiswa kwe-eyelash